Kunze mota Kutonhora Fani Kumanikidzwa kutonhora feni yemagetsi emagetsi
Motor Fan Kutonhora
Isu tiri mugadziri wemotokari fan fan
Iyo jenareta inogadzira kupisa kwakawanda kana ichitenderera kuti ibudise magetsi, uye mhepo inotonhora inofanira kupfuura pakati peiyo stator neiyo rotor. Naizvozvo, pachave neanofarira mashizha pane imwe mugumo wejenareta. Iwo ekumhanyisa-mhanya fan mashizha anofuridza mweya unotonhorera, uye panofanirwa kunge paine zvimwe kunze Iyo grid-senge mambure (kazhinji yakavharwa mudenderedzwa) ndiyo jenareta yemhepo, iyo inodzivirira mafeni mashizha ekudzivirira zvinhu kuti zvirege kuwira pama fan fan .
Mota fan fan uye jenareta fan fan yakavharwa pamwe chete kunzi mota fan fan. Pane mabasa maviri: 1. IP dziviriro nhanho, senge IP54, nhamba yekutanga ndeyekudzivirira solids kuti inyure mune iyo kesi uye kudzivirira vanhu kubva pakubata zvikamu zvine njodzi mune iyo kesi. Girazi remhepo rinotadzisa zvinhu zvekunze kubata fan. Nhamba yechipiri inomiririra kugona kwemvura. 2. Chengetedza duct yemhepo. Nekuti iyo fan inozvidzora-yega, kana paine hwindo remhepo, girazi remhepo rinofuridzirwa kusvika kuD kupera padivi nepakati (kutenderera kwakatenderedzwa) pakati pegirazi remhepo uye simbi yekupisa, nokudaro ichibvisa kupisa kubva pakunyura kwekupisa. Kana pasina girazi remhepo, mhepo yeiyo fan haina gwara, uye kupisa kupisa kupisa kwakanyanya murombo.
Zvisinei, zvakakodzera kuti usarudze isu!
Isu tiri kambani inogadzira mota fan fan inotonhorera zvigadzirwa. Mushure memakore ekuvandudza, kambani yakahwina kutendwa kwevakawanda vazhinji vakagadziriswa vatengi kuburikidza nemhando yepamusoro zvigadzirwa uye zvakanaka mabasa. Makore mazhinji ehupenyu hwekugadzira ndeyekukupa iwe nezvakanaka zvigadzirwa.
Kubvira payakagadzwa, kambani yakagara ichiteedzera kune tarenda-rinotungamira manejimendi musimboti, yakaunganidza maindasitiri elite, yakasangana yepamusoro ruzivo rwekunze tekinoroji, manejimendi nzira, uye mashandiro mashandiro pamwe neicho chaicho chemakambani epamba kupa makambani huwandu hwakazara hwemhinduro.